Ndiri mukomana ane makore 24 | Kwayedza
Ndiri mukomana ane makore 24
29 Aug, 2014 - 09:08	 2014-08-28T16:37:10+00:00 2014-08-29T09:00:37+00:00 0 Views
MAKADII veKwayedza? Makaita basa ndakamuwana wandaida nekudaro vaifona pa0733 813 867 ngavachirega havo. Ndatenda hangu.
Kune vaimbondifonera pa0733 391 386 chiregai henyu zvakaita zvandaishuvira. Makaita basa henyu veKwayedza nekundishambadzawo.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndiri kuda musikana anoda imba. Sms kana kufona pa0736 427 634.
Vaifona panhamba dzinoti 0783 243 568 ngavachirega nekuti ndakazomuwana murume wandaida.
Makadini? Ini ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi chekuda kuroorwa ane makore 18-23. Anofarirawo kugara kumusha nemuguta ngaandibate pa0783 202 295 asi kwete macall back.
Ndiri kutsvagawo mudzimai wokugara naye ane mwana mumwe kana asina ane makore 25 zvichidzika. Zita rangu ndinonzi Loyd Muchongwe, nhamba dzangu idzi 0713 506 882.
Ndiri murume ane makore 38 nevana vaviri ndinotsvaka mukadzi ane makore 26 zvichikwira, anonamata, ari mushandi weHurumende kana kuti anozvisenzera. Ndibatei pa0777 821 290.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 25 ndinotsvaga murume wekuronga naye hupenyu kwete zvekutamba. Ndine mwana mumwe chete anoda ngaandibate pa0783 456 141.
Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana vaviri ndinotsvagawo murume ane makore 33 zvichikwira. Ndiri HIV positive nekudaro ndinodawo ari positive anoshanda nokuti ini ndinoshanda. Vanoda vanondibata pa0717 202 626 asi varume vevanhu nevanobhipa kwete.
Ndiri musikana ane makore 15 ndinotsvagawo shamwari (penpal) yechisikana ine makore 10 kusvika 17. Anoda hushwamwari ngaandifonere pa0782 241 564.
Ini ndiri musikana ane makore 19 ndinotsvagawo mukomana anoda kuroora ane makore 24-27 ari pachokwadi. Nhamba dzangu idzi 0739 898 904, call me back kwete. Ndatenda hangu.
Ndiri musikana ane makore 19 ndiri kutsvaga mukomana ave kuda kuroora ari pachokwadi ane makore 21 kusvika 26. Vanoda ndibatei pa0783 663 888.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 25 ndinotsvagawo murume wokuroorana naye anoda zvemusha kwete anoda zve”time push” uye ari HIV positive seniwo. Ngaave ane makore 25 – 30 anoda zvekunamata. Ndinogara kuManicaland vanoda ndibatei pa0771 540 448.
Ndiri murume wechidiki ari kutsvaka mukadzi mukobvu ari HIV positive ane mwana mumwe chete kana asina. Vanoda ngavandibate pa0783 764 462.
Ini ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa nevana 4 ndiri kutsvaga mudzimai wekuroora ane vana 2 ari pachokwadi ane makore 30 kusvika pa36. Ngaave akazvipira kunoongororwa ropa, vanobipa kwete. Ndibatei paWhatsApp pa0773 214 194.
Ndiri mukomana ane makore 26, HIV+ uye ndinotsvaga musikana ane makore 24 kusvika 30 ari HIV+ sezvandiri asingaratidzike kurwara. Ngaave anoshanda kana mucross-border, anonamata. Andifarira anondibata kana paWhatsApp pa0772 761 114, ndatenda.
Ndine makore 36 nevana 2 ndiri kutsvagawo murume, ndakambonyorera kuchirongwa chino ndikasangana neane mukadzi wake saka handidi murume ane mukadzi. Ndinonamata AFM ndinonzi Cathrine, nhamba dzangu idzi 0778 291 385. Ndiri HIV negtive uye ndakasununguka kunotorwa ropa.
Makadini veKwayedza? Ndiri jaya rakazara riri kutsvaga mhandara yakazara inonamata yakazvipira kuongororwa ropa ine makore 25 kusvika 33. Ini ndine makore 33, nhamba dzangu 0716 374 187.
Ndiri mudzimai ane makore 36, ndinoshanda kuCentenary uye ndinotsvagawo murume ane makore 40-50 ari HIV+. Ndinoda asingashushi, anogeza ane rudo. Nhamba dzangu 0783 895 424.
Ndinotsvagawo mwanasikana wekuroora ane makore 18 kusvika 25 asina kumboroorwa kana kuita mwana. Ndinoshanda, ndinonzi Brandon. Nhamba dzangu 0774 445 115 asi call me back handidi.
Ndiri musikana ane makore 25, ndiri HIV positive uye ndinoda mukomana ari positive seni ari pachokwadi. Ndinoshanda mumba nhamba dzangu 0773 843 807.
Ndinonzi Kuda, ndine vana vaviri uye ndinoita basa remawoko. Ndinotsvagawo shamwari yechidzimai ine makore 20 kusvika 30. Handidi vanotumira macall me back. Nhamba yangu 0771 293 480.
Ndiri mukomana wemakore 31 ndinotsvagawo mukadzi ari pachokwadi chekuda imba asi asiri muchirongwa ane makore 23 kusvika 30. Vanoda fonai kana kutumira sms pa0771 294 014.
Ndiri murume ane makore 35, handina mwana uye ndiri kutsvagawo mudzimai ane makore 25 kusvika 30 ane mwana mumwe chete kana asina ari pachokwadi anoda zvemusha. Ndinobva kwaRusape, vanoda zvekutamba kwete. Nhamba dzangu 0782 198 372.
Munofara here veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 22, HIV positive uye ndiri kutsvagawo mukomana ari HIV+ pakuzvarwa seni asingaratidziki kurwara nekuti ini handiratidziki ane makore 23-25. Ngaave anoenda kuchechi dzemaPentecostals achienda kubasa kana kuchikoro, ini ndiri kuchikoro. Vari pachokwadi ndibatei pa0739 308 518.
Ndinonzi Tichafa David, ndine makore 20 uye ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20 akanaka anoda zvemafaro asina utachiona hweHIV. Anoda nezvangu ngaandifonere kana kundibata paWhatsApp pa0771 301 134.
Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana mumwe chete ndinotsvagavo murume anondiroora anoshanda muHurumende. Zvizhinji tozotaura, tibatei pa0771 395 489.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 28 ndinotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 45 ari HIV positive seni. Nhamba dzangu idzi 0783 308 188.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 27, mutema akasimba uye ndinotsvaga musikana wekufambidzana naye akanaka. Ndiri mutyairi wekombi, asina chirwere ngaandibate paWhatsApp pa0782 403 924.
Ndiri mukomana ane makore 28 ndinotsvagawo musikana anoda kuroorwa ane makore 19 – 22 Ngaandibate pa0783 259 514, ndinoshanda muHurumende.
Ndinotsvagawo murume wekuchengetana naye asina mukadzi ane makore 45 zvichikwira. Ini ndine makore 42 nevana vatatu, ndiri HIV negative uye nguva dzekufona kuma8 pm asi vane vakadzi kwete. Vanoda ndibatei pa 0734 024 486.
Ndiri mukomana ane makore 32 ndinotsvaga musikana anoda zvemba pachokwadi, nhamba dzangu 0773 731 958.
Ndiri kutsvagawo musikana ane makore 19 zvichidzika, munondibata pa0779 430 208.
Ndiri mukomana ane makore 28 ndinoda musikana ane makore 23 zvichidzika ane zvaanoita muupenyu. Ari negative ngaandibate pa0775 788 808, macall me back kwete.
Ndiri musikana ane makore 18 ndinodawo mukomana ane makore 22-26 anodawo kuti tironge ramangwana redu tozoroorana mberi. Vanoda ndibatei kana kutumira sms pa0771 742 830.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvakawo musikana ane makore 18-22 anoda zvekuroorwa uye anotya Mwari akatendeka. Nhamba dzangu idzo 0779 193 384.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika23 asina mwana, ari pachokwadi akazvipira kuenda ku HIV test. Ini ndiri negative, ndibatei pa0774 318 602 kana WhatsApp.
Ndiri kutsvagawo musikana akanaka ane makore 19 zvichidzika. Ndinonzi DJ Kudada, ndine makore 19 uye andifarira anondibata pa0783 702 821 .
Makadii? Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi handina kupindurwa. Ndiri mukadzi ane makore 43 nevana vatatu uye ndiri kutsvagawo murume anoshanda. Anoda ngaandibate pa0733 638 193.
Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana mumwe ndinoda murume ane makore 29 anosevenza. Nhare dzangu 0783 749 373.